ရိဒ်နယ်စပ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လိုက်သော်လည်း မြန်မာဘက်မှတင်ပို့သည့် ကုန်စည်အများစု အရောင်းအ? - Yangon Media Group
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရိဒ်နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ရက်ရှည် ပိတ်ထားခဲ့ပြီးနောက် မကြာမီရက် ပိုင်းမှစတင်၍ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ် စပ်တံတားပေါ်မှ သွားလာရောင်း ဝယ်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း မြန်မာဘက် မှတင်ပို့သည့် ကုန်စည်အများစုမှာ အရောင်းအဝယ်နှေးကွေးနေကြောင်း သိရသည်။
”နယ်စပ်အရောင်းအဝယ် ပိတ်သွားတာက မတ်လကုန်ရက် ပိုင်းကစပြီး အရောင်းအဝယ်ရပ် ဆိုင်းသွားတာပါ။ အခု ဧပြီ ၂၅ ရက် ကစပြီး လမ်းဖွင့်လိုက်ပြီလို့ တော့ ပြောတယ်။ ပစ္စည်းသေးတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာဘက်က တင်ပို့တဲ့ မုန့်မျိုးစုံ၊ စီးကရက်၊ ပလတ်စတစ် ပစ္စည်း၊ ဖိနပ်၊ ဖျော်ရည်မျိုးစုံ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ အရောင်းအ ဝယ်စဖြစ်နေပြီး ကွမ်းသီး၊ ဝက် အရှင်စတဲ့ ပစ္စည်းကြီးတွေကတော့ အရောင်းအဝယ်မလိုက်လာသေး ဘူး” ဟု ကွမ်းသီးကုန်သည် ဒေါ် လှလှက ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင်ပြောသည်။ ကလေးမြို့ကိုအခြေပြု၍ မြန် မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် ကုန်စည်ရောင်း ဝယ်ရေးစခန်းသို့ နေ့စဉ်ပြေးဆွဲ နေသည့် ကားဂိတ်အသင်းပေါင်း ၃ဝ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ယခုအခါ နယ် စပ်အသွားအလာဖွင့်လှစ်လိုက် သော်လည်း အရောင်းအဝယ်မ ကောင်းသေးသည့်အတွက် အချို့ ကားဂိတ်များမှ လိုင်းကားများပုံမှန် မထွက်နိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။
နယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေးပိတ် ခဲ့ရခြင်းမှာ မတ်လနောက်ဆုံးပတ် မှစတင်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည် နယ် ကျန်ဖိုင်းခရိုင် ကျန်းဖိုင်းမြို့ ကားသမား၊ အလုပ်သမားများနှင့် မြန်မာနီုင်ငံရိဒ်နယ်စပ်တစ်ဖက်ကမ်း ဇိုခေါဒါးရ်မြို့ဒေသခံ အလုပ်သမား၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သည့် ကားသမား များအကြား မပြေမလည်ဖြစ်ကြ ရာမှဖြစ်သည်။ ရိဒ်နယ်စပ် အရောင်းအဝယ် အကောင်းဆုံးကာလမှာ သင်္ကြန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ် သစ်ကူးကာလတို့ဖြစ်ပြီး အရောင်း အဝယ်ကောင်းသည့်ကာလတွင် ကလေးအခြေစိုက်ကားသင်းများမှ ကားအစီးရာချီ၍နေ့စဉ် အဝင်အ ထွက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် ရိဒ်နယ်စပ်တွင် အ များဆုံး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် မြန်မာဘက်မှ ကုန်စည်များတွင် ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းရွက်၊ ဝက်အရှင်၊ ဖရဲသီး၊ ဒေသထွက်သစ်သီးမျိုးစုံ၊ မုန့်မျိုးစုံ၊ ဖျော်ရည်ဘူးမျိုးစုံတို့ဖြစ် ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ဓာတ်မြေ သြဇာနှင့်ဆိုင်ကယ်တို့ကို တင်သွင်း ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်းနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ဧပြီ ၂၉ ရက်အထိ ပြန်လည် ထ?
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အုန်းတောကျေးရွာ(မြောက်ပိုင်း)မှ အိမ်ခြေ ၅ဝဝ ကျော် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြ??
”ကျွန်တော့်ကို အားမရတဲ့ ပရိသတ်တွေကျတော့ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းကို ကျွန်တော် မဖြည့်ဆည
ရော်ဘာ စိုက်ဧက လေးသောင်းကျော် အတွက် ချေးငွေရရှိရန် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရထံ စာရင်းတင်ပြထား ဟုဆ?
အမေရိကန်သ မ္မတများသို့ ထိုင်းဘုရင်များ ပေးခဲ့သော လက်ဆောင်များ ခင်းကျင်းပြသမည်
မြန်မာ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်အထိ ဆက်လက် ရပ်တန့်ဦးမည် ဟုဆို
ဗီယက်နမ်ဘဏ် လုပ်ငန်းအကြီး အကဲဟောင်း လိမ်လည်မှုဖြင့် သေဒဏ်ပေးခံရ